We.com.mm - Festival ပွဲမှာ သင့်ကိုအမိုက်ဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် ဆံပင်စတိုင်လ် (၁၀) မျိုး
Festival ပွဲမှာ သင့်ကိုအမိုက်ဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် ဆံပင်စတိုင်လ် (၁၀) မျိုး
Festival ပွဲတွေကလည်း ထပ်ပြီးရောက်လာတော့မှာဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် Festival ပွဲမှာ သင့်ကိုအမိုက်ဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် ဆံပင်စတိုင်လ် (၁၀) မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆံပင်စတိုင်လ်လေးတွေထဲက သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ပြီး အပြတ်လန်းလို့ရပြီနော်။ ကဲ... ဒီတော့ ဘယ်လိုဆံပင်စတိုင်လ်တွေလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအုံး...။
၁. ဒီလို hair bun လေးကတော့ festival ပွဲတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်လေးပါ။
၂. festival ပွဲမှာ အပြတ်လန်းနေအောင် ဒီလိုဆံပင်စတိုင်လ်လေးကိုလည်း ရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်။
၃. ဆံပင်ရှည်တဲ့ကောင်မလေးတွေဆို၇င်တော့ ဆံပင်ကို ဒီလိုကျစ်ဆံမြီးလေးကျစ်သွားတာက အရမ်းလှပါတယ်။ သူက festival ပွဲနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တယ်လေ။
၄. ဆံပင်နှစ်ဖက်ကို ဒီလို hair bun လေးလုပ်ပြီး ကျစ်ဆံမြီးလေးပါကျစ်ထားလို့ရတယ်နော်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်တစ်မျိုးပါပဲ။
၅. ဒီလိုတစ်ဝက်စည်းပြီးကျစ်ဆံမြီးကျစ်တာလေးကလည်း festival ပွဲနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်လေးပဲနော်။
၆. ကဲ... ဒီလိုဆံပင်စတိုင်လ်လေးဆိုရင်တော့ festival ပွဲတွေအတွက် ဘယ်တော့မှရိုးမသွားတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်တစ်ခုပါ။
၇. ရိုးရိုးလေးနဲ့အဆန်းဆုံးဖြစ်နေအောင် dream catcher လေးနဲ့ဆံပင်ပြင်သွားလို့ရတယ်နော်။
၈. ဆံပင်နှစ်ဖက်ကိုကျစ်ဆံမြီးကျစ်တဲ့အခါမှာ အဆုံးထိမကျစ်ပဲ ဒီလိုလေးကျစ်တာကလည်း festival ပွဲအတွက်သင့်တော်တဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်တစ်မျိုးပါ။
၉. hair bun လေးလုပ်ပြီး ကျစ်ဆံမြီးလေးပါထပ်ကျစ်လိုက်မယ်ဆို၇င်တော့ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်လေးကို ရရှိသွားမှာနော်။
၁၀. ကျစ်ဆံမြီးကိုမှ အောက်ကိုအဖျားရှူးသွားအောင် ဒီလိုလေးကျစ်တာကလည်း festival ပွဲတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဆံပင်စတိုင်လ်လေးပါ။ တော်တော်များများလည်းလုပ်ကြတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် ဘယ်တော့မှလည်းရိုးမသွားဘူးနော်။
ချစ်သူနဲ့ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဖက်ရှင်ကျပြီးလှနေစေမယ့် ဖက်ရှင် (၁၀) မျိုး
K Pop Star အဆိုတော်မလေး (၆) ယောက်ရဲ့ Halloween ဝတ်စုံဒီဇိုင်း